टिकटकबाट अव नेपालमा पनि आम्दानी हुने, यस्तो छ तरिका ! – List Khabar
Home / समाचार / टिकटकबाट अव नेपालमा पनि आम्दानी हुने, यस्तो छ तरिका !
admin4weeks ago समाचार Leaveacomment 46 Views
नेपालबाट सञ्चालन भएका टिकटक एकाउन्टहरुबाट पनि अव आम्दानी हुने भएको छ । यही २०७८ साल जेठ ७ गते शुक्रबारदेखि रिलिज नेपाल प्रा.लीले टिकटक एकाउन्टहरुको भेरिफिकेसनका लागि काम थाल्ने भएकाले नेपाली टिकटकबाट पनि आन्दानी हुने भएको हो । टिकटकका लागि नेपालबाट आफुहरु कन्टेन्ट पार्टनर भएकाले टिकटकको एकाउन्ट भेरिफिकेसनका लागि आधिकारीक रुपमा काम गर्ने भएको रिलिज नेपालले जनाएको छ । टिकटक एकाउन्ट भएका कुनै पनि व्यक्तिले भेरिफिकेसनका लागि http://releasenepal.com/tiktok/ लिंकमा क्लिक गरेर फाराम भर्न सक्ने रिलिज नेपालका प्रशासन विभाग प्रमुख अनुप भासुले जानकारी दिनुभयो ।
Previous कोरोना लागेपछि छविले लेखे यसबाट ब’च्ने उपायहरुबारे पढ्नैपर्ने स्टाटस्
Next घरमै आइसोलेसनमा बस्दा साँस फेर्न गाह्रो भयो ? तुरून्त अपनाउनुस् यी ९ उपाय